The talk presented by Daw Saw Khin Tint, the chairperson of Arakanese Women’s Association | ETHNICS VOICE ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
The talk presented by Daw Saw Khin Tint, the chairperson of Arakanese Women’s Association
Posted by Aung Zin Tun Thu at 1:22 AM0comments
ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကျောင်းတွင် ရခိုင်အမျိုးသမီးအသင်း၏ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဒေါ်စောခင်တင့်၏ဟောပြောချက် The talk presented by Daw Saw Khin Tint, the chairperson of Arakanese Women’s Association, at Aloetawpyi Monastery of Rathetaung Township, Rakhine State
ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကျောင်းတွင် ရခိုင်အမျိုးသမီးအသင်း၏ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဒေါ်စောခင်တင့်၏ဟောပြောချက်
၁။ ဒီနေ့ကျွန်မပြောချင်တာကရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေသိသင့်သိထိုက်တဲ့အချက်တွေကို ပြောကြားသွား မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Today, I’d like to talk about some facts that Arakanese should know.
၂။ ကျွန်မတို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်ကို မြောက်ဦးမြို့မှာရှိတဲ့ ရှစ်သောင်းဘုရားပုရ၀ဏ်ထဲက အာနန္ဒာစန္ဒြားမင်း ကျောက်စာထဲမှာ အာရက္ခဒေ့(ရှ်) (ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်) ဆိုပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
In King Ananda Candra’s stone inscription in the precinct of the Shitthoung Pagoda in Mrauk-Oo, our Arakan or Rakhine Land was recorded as Arakkhadesh (Arakan Land).
၃။ အာရက္ခဒေ့(ရှ်)၊ အဲဒီကမှ အာရက္ခ၊ ပြီးတော့ ရက္ခ၊ ရက္ခကနေ ရခိုင်ဆိုပြီးပြောင်းလာတယ်လို့ သမိုင်းစဉ်ဆက်စကားရှိပါတယ်။
၄။ အဲဒီလို ရခိုင် (သို့) အာရက္ခဒေ့ေ(ရှ်)လို့ ခေါ်သလိုပဲ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်၊ပေါ်တူဂီ၊ ဒိန်းမတ်၊နော်ဝေစတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးက ကျွန်မတို့ ရခိုင်ပြည်ကို အာရကန်(Arakan)လို့ ခေါ်ပါတယ်။
၅။ အဲဒါကြောင့်အာရကန်ဆိုတာကျွန်မတို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်ပါ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို အာရကန်နီး (Arakanese) ဆိုပြီး သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ရဲ့ရခိုင်သမိုင်းတွေ၊ သက်သေတွေပျောက် ကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရခိုင်ပြည်ကြီးကို သိမ်းပိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ရခိုင်သမိုင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေက သုတေသီပညာရှင်တွေ အပတ်တကုတ် အမျိုးမျိုးလေ့လာပြီးစာအုပ်တွေအမျိုးမျိုးထုတ်ပြီး သုတေသနပြုတဲ့ စာတမ်းတွေအားလုံးမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေအကြာင်းကို ရခိုင်ဆိုတဲ့စာတမ်းအစား အာရကန်(Arakan)ဆိုပြီးတော့ပဲ ရှိပါတယ်။
So ‘Arakan’ is our land and some Rakhine historical documents and eyewitnesses had been lost and our Arakan had been occupied, we have been able to find the term ‘Arakan’ instead of ‘Rakhine’ in all the research papers and historical books about which many prominent researchers from the Western Countries had studied in various scientific ways.
၆။ အဲဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ရခိုင်အကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အာရကန်(Arakan) နဲ့ပဲ့ကျွန်မတို့ကြည့်ရပါမယ်။
So if one wants to find some information about Rakhine in world history, one has to do so by using the term ‘Arakan’.
၇။ အဲဒီလို ကြည့်ရမယ့်စာတမ်းကို ဒီနေ့ ၁၉၅၁ခုနှစ်မှာ (ခုနကဆရာဦးမင်းဖြူပြောသွားခဲ့သလိုပါပဲ) ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု လက်ထက်မှာဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကို လွှတ်တော်အမတ်ပေးတဲ့ကိစ္စမှာ အဒူဂါးဗားဆိုတဲ့ မူဆလင်တစ်ဦးက ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှာ “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးအသစ်တစ်လုံးကို သူကဖန်တီးပြီး ရခိုင်ပြည်ကရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုပြီးလူမျိုးသစ်တစ်မျိုးကိုဖန်တီးရပါတယ်။
But during U Nu’s premiership in 1951, Bengali people were given the posts of parliament representatives, wherebyaMuslim called Abdu Gava usedabrand new term ‘Rohinger’ in 1951 and createdabrand new nationality ‘Rohingya’ in Arakan.
၈။ အဲဒီလို ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ ငါတို့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဟာ ရခိုင်ပြည်ကို ရခိုင်ပြည်တွေထက်တောင် စောပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်လောက် ဒီရခိုင်ပြည်မှာ နေခဲ့တဲ့အတွက် အာရကန်ဆိုတာငါတို့တိုင်းပြည်၊အာရကန်ဆိုတာငါတို့လူမျိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုဖန်တီးပြီးကမ္ဘာကိုတင်ပြပါတယ်။
၉။ ခုနှက ဆရာ ဦးဘိုမင်းဖြူ ပြောသွားခဲ့သလိုပဲ ၁၉၄၉ ခုနှစ်အထိ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်မှာ (ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့အထိ) ဒီနာမည်ကိုတစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး။
၁၀။ အဲဒါကိုပဲ ရခိုင်ပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော် နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ လူမျိုးရယ်လို့ ကမ္ဘာကို သူတို့ကစာတမ်းတင်ကြတယ်။
၁၁။ ဒီစာတမ်းတင်တာကို ဘယ်လောက်ထိလုပ်လာသလဲဆိုရင် သူတို့ စာတမ်းတင်လာတာ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်လာပါပြီ။
They have been so aggressive as to submit the research papers for over 20 years.
We, Arakanese, didn’t know or find out suchathing.
၁၃။ မြန်မာပြည်သူလူထုက မရိပ်စားမိတဲ့ပိုင်နက်ကျူးကျော်သူတွေပါပဲ။
၁၄။ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် ကမ္ဘာ့မီဒီယာ လောကမှာ သူတို့တွေဟာ မူဆလင်ကမ္ဘာက ထောက်ပံ့ပေးကမ်းမှုတွေကိုယူပြီး ကမ္ဘာကြီးမှာ အာရကန်(Arakan)ဆိုတာ ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ငါတ်ို့ရခိုင်ပြည်မှာ အရင့်အရင်ကနေလာကတည်းက ငါတို့လူမျိုး၊ ငါတို့ကိုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ စစ်အစိုးရက ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာခဲ့တဲ့အတွက် ငါတို့အာရကန် လူမျိုးတွေဟာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံလာရတယ်၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံရတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေရတယ်၊ ငါတို့ကိုနှိပ်စက်နေတယ်၊ ငါတို့မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေကို နှိပ်စက်နေတယ်ဆိုပြီး ကမ္ဘာကို မျိုးစုံသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကမ္ဘာ့မီဒီယာလောကမှာ သမိုင်းကိုလိမ်ညာပြီး တင်ပါတယ်။
For over 40 years, they have received financial support from the Muslim Circle to be able to make the world known about their made-up story concerning their so-called history by saying constantly in every possible way, “Arakan is our land. Rohingya is our name that has been in existence since our first dwelling in Arakan. As we’ve been suppressed and oppressed by the Myanmar military junta, we Arakanese have been badly maltreated. We’ve been deprived of human rights. We’ve been greatly oppressed. We Muslims have been persecuted!”
၁၅။ ခုနက ပြောသွားသလိုပဲ မြောက်ဦးမြို့ ဆိုတာ သူတို့ရဲ့မြို့၊ မြောက်ဦးရှင်ဘုရင်တွေဟာ ကုလားဘွဲ့ကိုခံယူထားတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ ရှင်ဘုရင် ဆိုပြီး သမိုင်းကိုလိမ်ညာတင်ပြနေတာ နှစ်ပေါင်း(၂၀) ကျော်ရှိပါပြီ။
၁၆။ ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွန်မတို့က လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်ကမှ ဒီအာရကန်(Arakan) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သူတို့သုံးနေတာကို တွေ့တဲ့အခါ မှာ ကျွန်မတို့က ဒီနေရာမှာ”ဟာ……….ငါတို့ရခိုင်သားတွေကိုကျော်ပြီး သူတို့အာရကန်လုပ်သွားပြီ။ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒီအချက်ကိုကန့်ကွက်ရမယ်။နှစ်ပေါင်း (၂၀) တောင်ကျော်နေပြီ။ ဒီကိစ္စကိုဘယ်လို လိုက်မီနိုင်အောင် ကြိုးစားကြမှာလဲ။ မီတဲ့နေရာက၊ ရတဲ့အခြေအနေမှာ ဒီကိစ္စကိုလုပ်ကို လုပ်ရမယ်လို့” ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်တွေ၊ ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ သမိုင်းပညာရှင်တွေအားလုံး ၊နိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့ သမိုင်းပညာရှင်တွေအားလုံး စုပေါင်းပြီး၊ ကျွန်မတို့ဟာကမ္ဘာကို” ဒီအာရကန်(Arakan) ဆိုတာ ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ မူပိုင်စာလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး၊ ဒီစာလုံးကိုလားလားမှ မသက်ဆိုင်တဲ့ ဘင်္ဂါလီလူတစ်စုက ကမ္ဘာကို ဖန်တီးလိမ်ညာ တင်ပြတဲ့အတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ ကန့်ကွက်စာတမ်းတစ်စောင်ကို မြန်မာပြည်တစ်ခွင်လုံးအပြင် ကမ္ဘာ့တစ်ခွင်လုံးမှာပါ ကျွန်မတို့တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Concerning this matter, only about one year ago did we find out that they had been using this term “Arakan”. When we found it, we cooperatively madeadecision by keeping in mind this idea, “Oh, they’ve announced themselves Arakanese regardless of our authentic status of being Arakanese. We can’t stand it lying down this time. We’ve got to object to it. It’s now well over 20 years. How should we try to catch up with it? We must oppose to this matter where we can catch up with under every possible condition.” Keeping in mind it, experts about Arakanese history, all Arakanese historians from Rakhine State and all the prominent historians from abroad could collaboratively submitaletter of objection to all over Myanmar as well as to the whole world with the theme words, “This term ‘Arakan’ is our Arakanese’s patent word. So we strongly object to the made-up story of that to-a-pinch unconcerned Bengali group about this term”.
၁၇။ အဲဒီလိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဟာ ကျွန်မတို့တွေ သူတို့အပေါ်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
It was one of the strongest objections we have ever made towards them.
၁၈။ ကျွန်မတို့ ရခိုင်များ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေ အခုထိရှိပါသေးတယ်။
၁၉။ ရခိုင်သမိုင်းမှတ်တမ်းကို ဖျောက်ဖျက်လို့မရနိုင်ပါဘူး။
Arakanese history cannot be rubbed out.
၂၀။အဲဒီအကြာင်းတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရေးသားပြုစုထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်း၊ စာအုပ်တွေကိုလည်း ကျန်နေခဲ့တဲ့ အတွက် နောက်ပြီးတော့မှပဲ ဒီကိုပို့ပေးလိုက်ပါမယ်။
I’ve left at home the documents and books written concerning these matters. So I’ll send them to you atalater date.
၂၁။ အဲဒီစာအုပ်စာတမ်းတွေကိုလည်း ဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်ကြပါလို့ ကျွန်မ ဒီနေရာကနေ တောင်းဆိုလိုပါတယ်။
I’d like to ask you to spare some time to study those books and documents.
၂၂။ ကိုယ်သမိုင်းကို ကိုယ်သိဖို့လို့ပါတယ်။
We all need to know about our own history.
၂၃။ အဲဒါကြောင့် ”ငါတို့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ငါတို့်ကို ဒီနေရာ နေခွင့်ပေးရမယ်။ဒါ ငါတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်” ဆိုပြီး သူတို့က အချင်းချင်း လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။
၂၄။ အဲဒါကို သူတို့တွေဟာ ဗျူဟာကြီးချပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။
၂၅။ ဗလီကိုနေ့စဉ်တက်ကြတဲ့ ကလေးတွေကို “အာရကန်ဆိုတာ ငါတို့လူမျိုး၊ အာရကန်ဆိုတာ ငါတို့တိုင်းပြည်၊ ဒီနိုင်ငံဟာ ငါတို့ရဲ့မူဆလင်နိုင်ငံ၊ငါတို့ပြန်ယူရမယ်။ ဒါ ငါတို့ရဲ့ပြည်၊ ဒါငါတို့ရဲ့ နိုင်ငံ၊ အာရကန်(Arakan) ဆိုတာ ငါတို့ကို ခေါ်တာ။အဲဒီရခိုင်သားတွေကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါ ငါတို့ရဲ့နေရာပဲ” ဆိုပြီး နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနှလုံးသားထဲမှာဝင်လာအောင်လုပ်ပါတယ်။
Those Muslim children attending mosques daily have been instilled in to stick in their heart with such words: “Arakanese is actually what our nationality is called. Arakan is our nation. This is our Muslim country. So we’ve got to take it back. This is our land. ‘Arakanese is the term we are referred to, not those Rakhine people! This is our place!”
၂၆။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင် Brainwash ပေါ့။ ဦးနှောက်ထဲကို စွဲသွားအောင်ရိုက်သွင်းတာ။
By English term, their ‘instilling’ is ‘brainwash’ _ they have made such false ideas adhere to their heads.
၂၇။ အဲဒါကြောင့် အသက် (၄၀) လောက်ရှိတဲ့ ဒီမြန်မာပြည်ကိုရောက်နေတဲ့ မူဆလင်တစ်ယောက် ဆိုရင် “တကယ်ပဲဒီပြည်ဟာတို့ရဲ့ မူဆလင်ပြည်ပါပဲလား။ဒီတိုင်းပြည်ကိုငါတို့တွေပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲ မဟုတ်လား” ဆိုတဲ့စိတ်ဟာ သူတို့ကိုယ်အနှံ့ ကိန်းအောင်းနေတဲ့အတွက် ဒီတိုင်းပြည်ကို တစ်ချိန်ချိန်မှာ ငါတို့ရအောင်ယူမယ် ဆိုတဲ့စီမံကိန်းကို သူတို့ကလုပ်ထားပါပြီ။
SoaMuslim of about 40 years of age in Myanmar really has such an idea as this, “Oh, this Rakhine state had been our Muslim country indeed. So we ought to possess it.” Such an idea has seeped through the flesh and bones of those Muslims. Therefore, they’ve plannedascheme that they’ll try to take back our country someday.”
၂၈။ ဒီနေရာမှာ (ပြောချင်တာက) ကျွန်မတို့ ရခိုင်ပြည်မှာ နေထိုင်ကြီးပြင်းပြီး၊ ပညာတတ်ဖြစ်သွားကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီ မူဆလင် ခေါင်းဆောင် တွေက ခေါင်းဆောင်ပြီး၊ ဒီကိစ္စကို လုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၉။ ပညာတတ်လူတန်းစားကလုပ်ပြီး၊ အခု နကန်းတစ်လုံးမှ မသိတဲ့ ဒီဘင်္ဂါလီတွေကို အသုံးချပြီးကျွန်မတို့တိုင်းပြည်က်ို ဒီလိုလုပ်နေတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃၀။ သူတို့နောက်ကလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ မူဆလင်တိုင်းပြည်တွေကလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကို လိုလေးသေးမရှိ ကာကွယ်ပေးနေတဲ့အတွက် ဒီအန္တရာယ်ဟာ ကျွန်မတို့တတွေအတွက် ဧရာမကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့သိထားကြပါတယ်။
၃၁။ ဒီအန္တရာယ်ကြီးဟာ ကျွန်မတို့ရခိုင်ပြည်သာမက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ အန္တရာယ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃၂။ သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းဟာရခိုင်ပြည်မှာပဲ ရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။
Their scheme won’t stop in Rakhine State alone.
၃၃။ “ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးကို ဝါးမျိုသွားမယ်” ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ အကြံအစည်၊ မဟာဗျူုဟာတွေဟာ သူတို့ရေးထားတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေထဲမှာ အသေအချာ ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရှာဖွေဖတ်မှတ် သိရှိထားတဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုလည်း ကျွန်မတို့တွေဟာ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ “ဒီကိစ္စဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စသာမဟုတ်။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ တကယ့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကိုအလေးအနက်ထားပါ။ ဒီကိစ္စကိုလုပ်ပါ” ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) လလောက်တည်းက ကျွန်မတို့ ပြောနေခဲ့တာပါ။
By finding and seeing the books and documents they have written, we have actually known and recorded their ideas and scheme with their resolution, ‘We’ll try to Islamize the whole Myanmar.” So since about two months ago, we made it known to the government repeatedly, “This is not just Rakhine State matter. It’s also one of the crucial matters of the Union of Myanmar. Please be serious about this matter. Make haste in carrying out this matter.”
၃၄။ “ဖြစ်လာတော့မယ်။ဖြစ်လာတော့မယ်” လို့ သိပြီးသား၊ မြင်ပြီးသားပါ။
We’ve known and seen in advance that it would break out sooner or later.
၃၅။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စဖြစ်လာမှာကို ကျွန်မတို့သိမြင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်လည်းဖြစ်နေပါပြီ။
So we’ve foreseen that this issue would break out soon. Now it’s happening.
၃၆။ မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ မဖြစ်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။
In Myanmar, too, it’s happening. It’s the real truth!
၃၇။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတာလောက် မပြင်းထန်ပေမယ့် ဟိုမှာအနုနည်းနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
၃၈။ အဲဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားအားလုံးကိုလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရသိအောင် အမြဲတမ်းတင်ပြ
So, while we’ve been constantly trying to make the government really aware of all these matters, this issue arose.
၃၉။ ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သား တွေကိုပြောချင်တာကဒီကိစ္စဟာ သာမန်ကိစ္စရပ်ဆိုပြီး ပေါ့လို့မရပါဘူး။
So, we shouldn’t be negligent in this matter, thinking that it’s just an ordinary matter. I’d like to point it out to these Arakanese people.
၄၀။ ဒီကိစ္စမှာသူတို့ဟာ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော် ဗျူဟာကောင်းကောင်းချပြီး၊ ရခိုင်ပြည်ကြီးကို မရရအောင် သူတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။
They’ve been doing their utmost best withawell-planned scheme to be able to occupy the whole Arakan without fail for over 20 years.
၄၁။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ရဲ့စာတမ်းမှာ “ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေကလည်း ဟုတ်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာ လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုး ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရက နှိပ်စက်ထားတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး အဆုံးရှုံးခံရတယ်။ အရမ်းသနားစရာကောင်းတယ်။ ဘာကြောင့်သူတို့တွေကို ဒီအစိုးရက လူ့အခွင့်အရေး မပေးရတာလဲ။” ဆိုပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂကလည်း လက်ခံထားပါတယ်။ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန် နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကလည်း ဒါကိုလက်ခံထားကြပါတယ်။ အဲဒီလို သူတို့တွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေအားလုံးက သူတို့ကိုလက်ခံလာအောင် လိမ်လည်ပြီး ဒီစာတွေ၊သမိုင်းတွေကို လိမ်ပြီး နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ကမ္ဘာ့မီဒီယာမှာ တင်ပါတယ်။
Therefore, almost the whole world has come to accept thatanational race named Rohingya has been suppressed by the Myanmar government, deprived of human rights and has been very pitiful. They have also come to pose suchaquestion as this: “Why hasn’t the Myanmar government given them human rights?” The United Nations Organization has accepted that so-called Rohingya as suchadestitute people. The United States, the United Kingdom and European countries have also accepted their destitution. By this means, the so-called Rohingyas have uploadedalot of falsely written groundless history and articles of theirs on the world media day in, day out, so that all the countries over the world will come to accept them asarighteous national race of the Union of Myanmar.
၄၂။ ဘယ်သူကမှ အဲဒါကို ကောင်းကောင်းကန့်ကွက်နိုင်ခဲ့သူ မရှိပါဘူး။
No one could oppose to their enormous tell-tale fully and well.
၄၃။ အမေရိကမှာရှိတဲ့ ဒေါက်တာအေးကျော်၊ ဒေါက်တာအေးချမ်းစတဲ့ သမိုင်းသုတေသီတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။
၄၄။ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ မျိုးချစ်လူငယ်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကလည်း သူတ်ို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။
Young Patriotic Students’ Association from Japan strongly protested their deeds.
၄၅။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူတို့နဲ့ အပြန်အလှန်ပြောဆိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတာ (၁၀)နှစ်မက ရှိပါပြီ။
၄၆။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကတော့ လုံးဝမဖြုံ ပါဘူး။
But they have never retreated.
၄၇။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက် မီဒီယာလောကမှာ ဒီကိစ္စကိုပဲဖြန့်နေပြီး ကမ္ဘာ့လောကက သူတို့နောက်ကပဲ ရပ်တည်ပြီးလက်ခံလာကြတဲ့အတွက် သူတို့မှာအင်အားပိုတိုးလာပါတယ်။
၄၈။ ဒါကြောင့်ဒီစာတမ်းကိုမဖြစ်မနေတင်ရမယ်လို့ယူဆဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်မတို့ကဒီလူတွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုလိမ်နေတာ။လူလိမ်တွေပဲ။ သူတို့တွေပြောတဲ့စကားဟာ မဟုတ်တာတွေပဲ များနေတာပဲ။ မြောက်ဦးမြို့ဆိုတာဒီလိုမျိုး။ မြောက်ဦးရှင်ဘုရင်တွေဟာ ဘာကြောင့် ကုလားဘွဲ့ကို ခံယူရတာလဲ။
၄၉။ အဲဒီအချိန်က အခုဘင်္ဂလားဒေ့(ရှ်) လို့ခေါ်တဲ့ဒေသကို ဘင်္ဂါ(၁၂)မြို့လို့ ခေါ်ပါတယ်။
At that time, the region which is now named ‘Bangladesh’ was called ‘12 Benga towns’.
၅၀။ အဲဒီဘင်္ဂါ(၁၂)မြို့ဟာ အမြဲတမ်း ရခိုင်ရှင်ဘုရင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာ ရှိနေတဲ့အတွက် ရခိုင်ရှင်ဘုရင်တွေက ကုလားတွေလေးစားအောင်ဆိုပြီး ကုလားဘွဲ့ကိုခံယူထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
According to the evident historical documents, as those 12 Benga towns had always been under Arakanese kings’ sovereignty, the kings had taken the Muslim titles so as to win the Bengali Muslims’ awe and respect.
၅၁။ ဒါကြောင့် ဒီရခိုင်ရှင်ဘုရင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ဘုရင် တွေသာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုလားဘွဲ့ခံ ရခိုင်ရှင်ဘုရင်မှာ ရခိုင်အမည်၊ ကုလားဘွဲ့အမည်နဲ့ပဲ သူတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ စေတီပုထိုးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အခုထိလည်း ရှိနေပါတယ်။
၅၂။ ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
Therefore, it is dead sure that they were devout Buddhists.
၅၃။ သူတို့တွေကပြောကြတယ်။ “မြောက်ဦးရှင်ဘုရင်အားလုံးဟာ ကုလားဘွဲ့ခံထားတယ်။ ဒါကြောင့် ငါတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်၊ မြောက်ဦးမြို့ဟာ ငါတို့ရဲ့မြို့၊ ငါတို့ရဲ့နန်းတော်၊” ဆိုပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အသေအချာ လိမ်နေတာပါပဲ။
၅၄။ အဲဒါကြောင့် “ဒီရိုဟင်ဂျာ” လို့နာမည်သစ်တပ်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီတစ်စုတော့ ကမ္ဘာကိုလိမ်နေတယ် ဆိုတာကို ကျွန်မတို့တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က ကမ္ဘာကိုစာတမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၅၅။ ဆက်တိုက်လည်း ကျွန်မတို့ ဒီအကြောင်းတွေကို ကမ္ဘာသိအောင် ပြောကြားသွားပါမယ်။
In the ongoing manner, we’ll talk about the real history of Arakan to the whole world so that all the world people will come to realize it.
၅၆။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စကလင်တန် လာတဲ့အခါ ကျွန်မတို့က သူထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပါတယ်။
၅၇။ အဲဒီလို ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံက တစ်နှစ်မှာတစ်ခါ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ပြန်တမ်းစာ ထုတ်ပါတယ်။
၅၈။ အဲဒီပြန်တမ်းစာရဲ့ People ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ “မြန်မာနိုင်ငံ၏တိုင်းရင်းသားများမှာ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ကရင်၊ရိုဟင်ဂျာ၊ရခိုင်၊အာရကန်” ဆိုပြီး ပါဝင်နေပါတယ်။
၅၉။ ဆိုလိုတာက သူတို့ကမ္ဘာကိုထုတ်ပြန်တဲ့ ပြန်တမ်းမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖြစ် သူတို့လက်ခံပြီး ထည့်ထားပါတယ်။
၆၀။ “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျိုးထဲမှာ ‘ရိုဟင်ဂျာ’ လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးမရှိပါဘူး” ရယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
၆၁။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကလည်း သူတို့တွေဟာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးခင်ရီကလည်း ဖော်ပြပြောဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
၆၂။ “မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားထဲမှာ (ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ) မရှိဘူး။” လို့မြန်မာနိုင်ငံက ပြောထားပြီးသားပါ။
၆၃။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို မြန်မာနိုင်ငံက မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ကမ္ဘာကိုထုတ်ပြန်တဲ့စာတမ်းမှာ ဘာလို့ထည့်ရမှာလဲ ဆိုပြီး ဒေါက်တာအေးကျော်က ကန့်ကွက်စာ ပေးပါတယ်။
၆၄။ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက ကန့်ကွက်စာ ပေးပါတယ်။
Other national races and Arakanese people sent letters of protest (to the US).
၆၅။ အဲဒါကြောင့် မစ္စကလင်တန် မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့အခါ ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
That’s why we gave Ms. Clinton an open letter concerning the issue when she came to Myanmar.
၆၆။ ဒီလိုပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာ “ရိုဟင်ဂျာ လို့အမည်ခံတဲ့လူတွေက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအဖြစ် ခံယူခွင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ တောင်းဆိုနေခြင်းသည် ရိုးသားသော အကြံအစည်မဟုတ်။ သူတို့တွေဟာ ရခိုင်ပြည်ကို မူဆလင်နိုင်ငံအဖြစ်ထူထောင်ရန်အတွက်သာ ဖြစ်တယ်” ဆိုတာကို သူတို့တွေ ကိုယ်တိုင် ရေးသားထားတဲ့ ဘယ်စာအုပ်စာတမ်းတွေကိုဖတ်ရင် ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကို သိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုသာ(သူတို့ကို)လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်ဟာ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မူဆလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားခဲ့ရင် အရှေ့တောင်အာရှမှာ နောက်ထပ်ပါလက်စတိုင်းလို နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ရင် ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်စတဲ့နိုင်ငံတွေ ခံနိုင်ဦးမှာလား။ ခင်ဗျားတို့တွေမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ရခိုင်ပြည်ကို လိုချင်တဲ့ ဒီဘင်္ဂါလီ လူဆိုးတို့၏ လုပ်ရပ်သည် ရခိုင်အရေးသက်သက်မဟုတ်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးကိစ္စသက်သက်မဟုတ်၊ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်မတို့ ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားအားလုံးရဲ့ အရေးကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကို သတိပြုကြပါ” လို့ကျွန်မတို့ အိတ်ဖွင့်စာ ပေးပါတယ်။
In our open letter, we expressed that the intention of the people so-called “Rohingya” asking for citizenship as Arakanese national race from Myanmar is dishonest; that their real intention has been only to be able to set up an Islamic country in Arakan and that all those facts had been written in those given books and magazines. We also described that if Rakhine State (former Arakan) were to become an Islamic country asaresult of accepting them asanational race in suchaway and ifanew nation like Palestine were to arise in South-east Asia, we wondered whether the United States of yours, the UK and other countries would be able to withstand the forthcoming situations. We went on describing that they American are also responsible for it, and that the prevalent bad deeds of those Bengali villains withahunger for Rakhine State is not just the Rakhine state issue; that it is also that of the Union of Myanmar as well as that of all the global people.
၆၇။ အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ဒီကိစ္စဖြစ်လာပါတယ်။ (၂)လ မကြာပါဘူး။
As you all can see now, this issue has come up! It didn’t take even2months.
၆၈။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကို ကျွန်မ တို့ကအားလုံး မြင်ပြီးသားပါပဲ။
Therefore, we’ve already seen in advance that this issue would arise very soon.
၆၉။ ဒါကြောင့် ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်း အားလုံးသိနားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
So, everyone needs to realize these incidents, too.
၇၀။ အခုဖြစ်စဉ်မှာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အလျင်အမြန် ဖြစ်သွားခဲ့ရတာလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကို ကျွန်မတို့ သုံးသပ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
၇၁။ ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ရတဲ့အပေါ်မှာ ငါတို့ဘာကိုဆင်ခြင်ရမှာလဲ၊ ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေ ဘာကိုသိဖို့ လိုတာလဲ ဆိုတာကို သိနားလည်ထားဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
We’re strongly convinced that we Arakanese need to realize the necessary things to be contemplated and known over the prevalent issues.
၇၂။ အရင်ကရော အခုပါ ဒီရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီ တွေဟာရခိုင်ပြည်ထဲမှာပဲ ရပ်တန့်မနေကြပါဘူး။
၇၃။ မြန်မာနိုင်ငံကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဝင်ရောက်နေကြတာပါ။
They are entering Myanmar day in, day out.
၇၄။ ဒီလိုဝင်ပြီး ဘင်္ဂါလီတွေ ဘာလုပ်ကြတာလဲ။
After entering Myanmar, what do those Bengali people do?
၇၅။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသူတွေကို လက်ထပ်ယူတယ်။
They try to marry all kinds of Myanmar national race girls.
၇၆။ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာရှိတဲ့ ကရင်မလေးတွေ၊ဗမာမလေးတွေတော်တော်များများ၊ မော်လမြိုင်တစ်ဝက်လောက်ကုလား၊မုဒုံတစ်မြို့လုံးကုလား၊တနသာင်္ရီတိုင်းတစ်ဝက်လောက် မူဆလင်ဖြစ်သွားပြီ။
၇၇။ ရှမ်းမ၊ကချင်မ၊ကရင်မ၊ရွှေလီမှာရှိတဲ့တရုပ်ကပြားမကအဆုံးအားလုံးကိုဒီဘင်္ဂါလီတွေက “ငါတို့ကရခိုင်သားတွေပါ”လို့ပြောဆိုသိမ်းသွင်းပြီးတိုင်းရင်းသားတွေကိုလက်ထပ်ယူလိုက်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအများကြီးပါပဲ။
There have been numerous incidents in which the confidence of quiteafew maidens of Shan, Kachin, Karen origin to Chinese hybrid in Shweli have been won with the dissembling words: “We’re Arakanese (Muslim).” and were married to by those Bengali people.
၇၈။ မြန်မာပြည်တစ်ခွင်လုံးမှာ (သူတို့) ပြန့်နေပါပြီ။
၇၉။ ဒီပြသာနာ ဟာငါတို့ပြသာနာမဟုတ်သေးဘူး။
This problem is not just ours.
၈၀။ ငါတို့ရခိုင်သူတွေဟာ(ဒီကိစ္စမှာ) တာဝန်ကျေပါတယ်။
၈၁။ (ငါတို့တွေဟာ) ကုလားကိုလင်မတော်ကြပါဘူး။
၈၂။ လုံးဝမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ထောင်မှာတစ်ယောက်၊ တစ်သောင်းမှာ တစ်ယောက်၊ တစ်သိန်းမှာတစ်ယောက် ရှိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီရခိုင်သူဟာ ကျွန်မတို့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ လုံးဝ မပက်သက်တော့ပါဘူး။
“No one has ever done so?” you may ask. Then I’ll say, “Yes, but only one out ofathousand, of ten thousand or ofahundred thousand girls would do so!” if there were suchacase, too, she’s no more concerned with our Buddhist Arakanese.
၈၃။ အဲဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုးသာ လူမျိုးရေးပြသာနာကို ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် “ငါတို့ကရခိုင်၊သင်းတို့ကကုလား” လို့ ဒီနေ့အထိ ကျွန်မတို့ ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး တင်ပြနိုင်ပါတယ်။
So, if we solve the racial problem in this way, we can definitely say up to now, “We’re Arakanese! They’re Bengali!”
၈၄။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီပြဿနာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ။
How will the Union of Myanmar solve this problem?
၈၅။ ဒီကိစ္စဟာ မြန်မာအရေးကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလား။
Isn’t this the important issue of Myanmar?
၈၆။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူဦးရေမှာ မိန်းမယူပြီးတော့ generation by generation နောက်မျိုးဆက်တွေကို မူဆလင်ဘာသာဖြစ်အောင် လုပ်သွားရင် သူတို့တွေပွားလာရင် ဘယ်လို လုပ်ကြမှာလဲ။ ဘယ်လို ဟန့်တားကြမှာလဲ။
၈၇။ ဒါကြောင့် “ဒီကိစ္စဟာ ကျွန်မတို့ရခိုင်အရေးကိစ္စသက်သက်မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ အရေးကိစ္စဖြစ်တယ်” ဆို တာကို ကျွန်မ အကျယ်တဝင့် အမြဲတမ်း ပြောဆိုပါတယ်။
So I’ve always said, “This is not just the Arakanese issue but also that of the Republic of the Union of Myanmar?”
၈၈။ ဒါကြောင့် လက်ရှိဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်မတို့ ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေ အများကြီးပေးဆပ်(ခဲ့) ရပါတယ်။ အများကြီး ဆုံးရှုံးပါတယ်။
So we Arakanese have had to sacrificealot in the present issue; we’ve also lost much.
၈၉။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မတို့ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေ ပေးဆပ်နေရတဲ့ အမှန်တကယ်ကိစ္စကို မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ ကချင်၊ ကယား စတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကလည်း “ဟာ…….ဟုတ်တာပဲ။ ဒါတွေဟာ အမှန်တရားပါလား။ သူတို့တွေဒီလိုမျိုးလုပ်နေတာပါလား။ ကြည့်စမ်း။ ရခိုင်သားတွေကို ဒီလိုလုပ်တယ်။ ငါတို့ ရခိုင်သားတွေကို သူတို့တွေ ဒီလို လုပ်နေတာပါလား။
But, in the present time of Arakanese people’s sacrifice, all the national races such as Kachin, Kayah, etc. in the whole Myanmar have joined hand in hand with us in these incidents saying, “Oh, right! These are the real truths. Those Bengali people are carrying out this malicious scheme. Look! They’re doing such malicious things to our Arakanese people!”
၉၀။ ကျွန်မတို့ဖွင့်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ လာလှူတဲ့ဗမာတွေ၊ကချင်တွေ၊ရှမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
There were Burmese, Kachin, Shan, etc. who come and donate cash and kind at the camps of victims we’ve opened.
၉၁။ “ဒီလှူဒါန်းလိုက်တာတွေဟာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဆီကိုအမှန်တကယ်ရောက်မှာလား။ ကုလားတွေဆီကိုရောက်မှာလား။” လို့မေးတတ်ပါတယ်။ “ရခိုင်တွေဆီပဲ ရောက်မှာပါ” လို့ပြောမှလှူတယ်။
၉၂။ “ဒီလူတွေကို ငါတို့သွားပြီးသာ သတ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်” လို့ပြောကြတဲ့သူတို့တွေရဲ့ဒေါသ၊ သူတို့တွေရဲ့ စေတနာကို မြင်ရတဲ့အတွက် ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မတို့ပေးဆပ်ရတဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးက ကျွန်မတို့ရခိုင်ဖက်ကို ထောက်ခံလာခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးအမြတ်တစ်ခုကို ကျွန်မတို့ ခံစားရပါတယ်။
Seeing their great anger and compassion, and hearing them say, “We just want to go and kill all of those Bengali people with our own hands!” we’ve now got the advantage of gaining the support of all the national races all over Myanmar on the incidents that we’ve sacrificed so far.
၉၃။ နောက်တစ်ချက်က တစ်ကမ္ဘာလုံးက “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီဘင်္ဂါလီကုလားတွေအပေါ် နှိပ်စက်နေတယ်၊ ရက်စက်နေတယ်”ဆိုပြီးတစ်ချိန်လုံးသူတို့ကဝါဒဖြန့်ပါတယ်။
၉၄။ သူတို့က ဒီမှာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ သက်သေခံဓါတ်ပုံ ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးရင် အဲဒါကို ကမ္ဘာကို တင်ပြပါတယ်။
၉၅။ “ငါတို့ကို ဒီလို သတ်နေပြီ။ ဟာ…ဒီစစ်သားတွေက ငါတို့ကို သတ်ဖြတ်ပါတယ်။ ငါတို့ရွာကို မီးရှို့ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
၉၆။ (ဒါပေမယ့် တကယ်တော့) ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မီးရှို့တယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်။ “ကျွန်တော်တို့ရွာကို မနေနိုင်အောင် မီးရှို့ပါတယ်” ဆိုပြီး ကမ္ဘာကို တိုင်တန်းပါတယ်။
But, in reality, the Bengali people set fire to their own houses and then photograph the blazing houses, and after that, they complained to the world, “The Rakhine people set fire to our houses so that we’ll not be able to live here!”
၉၇။ အဲဒီလိုမျိုးနှစ်ပေါင်း(၂၀)လောက် သူတို့လုပ်လာတဲ့အခါ ကမ္ဘာကလည်းတကယ် ယုံကြည်လာတယ်။
၉၈။ ယုံကြည်ပြီး သူတို့ဘက်က ပါနေတာပါပဲ။
That’s why the world citizens have been on their side.
၉၉။ ကျွန်မဆိုလိုတာက ဘင်္ဂါလီ၊ ဒီမှာရောက်နေတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ လိမ်ညာမှုအောက်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀၀။ အဲဒါကြောင့် လက်ရှိဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်မတို့ ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေ ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို အခုအခါမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်း အမှန်တကယ် သိမြင်သွားကြပါပြီ။
Therefore, in the present time, the whole world has already known well about the serious sacrifices the Arakanese people have made in the recent incidents.
၁၀၁။ တကယ်ခံရတဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေ ခံနေရပါတယ်။
Who were the real victims in the recent incidents? Of course, Arakanese people! Buddhist Arakanese people!
၁၀၂။ အခုဘယ်လောက်များ ရက်စက်သလဲ ကြည့်တော့။
Now, see how cruel and inhumane they have been!
၁၀၃။ အခုကျွန်မတို့မှာ document တွေအပြည့်အစုံ ရထားပါပြီ။
Now, we’ve gotacomplete collection of documents.
၁၀၄။ ကူတောင်မှာ အသတ်ခံသွားရတဲ့ လူ(၁၁)ဦး၊ အဲဒီအစော်ကားခံရတဲ့ ကျောက်နီမော်က မိန်းကလေးကိစ္စ၊ ဒီကိစ္စတွေကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် “ကဲ…..မင်းတို့ကြည့်။ ဒီကုလားတွေ ဘယ်လောက်ထိ ယုတ်မာတာလဲဆိုတာ မင်းတို့မြင်ကြပြီလား။ ငါတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ဘယ်လေက်ထိ ရက်စက်လဲဆိုတာ မင်းတို့သိကြပြီလား”။ဆိုပြီး (သိသွားအောင်) ဒီစာတွေ တစ်ကမ္ဘာလုံး မရောက်ရောက်အောင် ပြန်ပြီးတင်ပြ၊ဖြန့်ပြဖို့က ကျွန်မတို့ရဲ့တာဝန်ပါ။ ကျွန်မတို့ (တစ်ကမ္ဘာလုံး) ရောက်အောင်လည်း တင်ပြသွားမယ်။
To the whole world, we need to show the 11 people who had been killed in Gudaung, the case of that raped girl from Kyauknimaw, etc., and proclaim, “Well, you see for yourselves. Can you see now how despicable and unruly those Bengali people are? Do you see how cruel they are?” Our duty is to be able to present and spread their true colours to the whole world without fail. We’ll also do our utmost best to be able to present our documents to the whole world!
၁၀၅။ ကုလသမဂ္ဂကိုလည်း ရောက်အောင်တင်ပြပါမယ်။ ကမ္ဘာသူ၊ကမ္ဘာသားအားလုံးသိအောင်လည်း ကျွန်မတို့ဒီစာတမ်းတွေကို ကျွန်မတို့ တင်ပြပါမယ်။
We’ll also submit our well-documented research paper to the United Nations. We’ll try our best to be able to present it all over the world!
၁၀၆။ ဒါတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျွန်မတို့မှာ သက်သေအားလုံး ရရှိထားပါပြီ။
We’ve got all the evidences and eye-witnesses concerning these facts.
၁၀၇။ ဒါကြောင့် ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာ ကျွန်မတို့ရခိုင်သားတွေတော့ ရပိုင်ခွင့် အားလုံးကို ရရှိနိုင်အောင်၊ ဆုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ကျွန်မတို့ ကြိုးစားရပါမယ်။
So, we have to try our best to be able to gain all the possible rights that are really worthy of the sacrifices that our Arakanese people have made up to now.
၁၀၈။ ကျွန်မတို့ ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေ သိထားရမှာက သူတို့တွေရဲ့နောက်မှာ အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက် ဒီငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီး ကျွန်မတို့လူမျိုးတွေ အားလုံးကို ဒီငွေကြေးတွေနဲ့ဖိသတ်ပြီး၊ ဓနအင်အားနဲ့ဖိသတ်ပြီး၊ သူတို့လိုချင်တဲ့ကိစ္စအားလုံးကို လုပ်ယူသွားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
The important thing we Arakanese should know is that as there isatremendous financial backing behind those Bengali people, they have made up all the things they’ve wanted with the money they easily receive regularly. In other words, they have put all our national people to death with their immense strength of wealth!
၁၀၉။ အဲဒါကြောင့် ဒီကိစ္စမှာ ကျွန်မတို့တွေဟာ တရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေ၊ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ မဟုတ်တဲ့သူတွေ၊ တရားမဝင်ရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေသူတွေ၊ ဒီလူတွေအားလုံးကို ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိစ္စအတွက် ရှေ့ဆက်ပြီး ကျွန်မတို့ လုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ်။
Therefore, in this issue, we’ve got to keep trying to be able to do legislative measures towards those people who had immigrated illegally, those who are not within the legal boundary, and those who have become wealthy with the money they got illegally.
၁၁၀။ ဒါတွေအားလုံးဟာလွှတ်တော်ထဲကိုလည်းရောက်သွားရပါမယ်။ အားလုံး သိနားလည် အောင်လည်း လုပ်ရပါမယ်။
All of these proposals also need to reach the Hluttaw (the Central Legislative Body). We need to make them known to all the world citizens, too.
၁၁၁။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မထပ်ပြောချင်တာက ဒီဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟာ သာမန်ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။
So, I’d like to add that this is not just an ordinary honest matter.
၁၁၂။ သူတို့ဆီက ဒီလောက်အင်အားကြီးတဲ့ စီမံချက်တွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်မတို့ ရခိုင်လူမျိုးသက်သက်နဲ့ ကာကွယ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
We Arakanese people alone can’t stop them from their forceful implementation of this well-backed scheme of Islamizing the whole Myanmar – let alone Arakan!
၁၁၃။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတို့ဘက်မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ပါဝင်လာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမယ်။ အသိပေးနိုင်ရပါမယ်။ သူတို့နဲ့တန်းတူ ပြည်ထောင်စုသား ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ ပြောနိုင်ရပါမယ်။
Therefore, we must be able to work hard so that all the Myanmar nationalities will join hand in hand with us. We must also be able to send the proper messages to them in time as well as to receive their positive messages. We must be able to tell them that we’re the rightful members of the Union of Myanmar like them, as well.
၁၁၄။ နောက်တစ်ချက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အတိုက်အခံပါတီအားလုံးကိုလည်း ကျွန်မတို့ဘက် ပါလာအောင် ပြောဆိုစည်းရုံးရပါမယ်။
Another point is that we must also organize all the opposition parties in Myanmar so as for them to share the same opinion as us and to join us in this matter.
၁၁၅။ (၈၈)မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကို ကျွန်မတို့ပြောပါတယ်။ ပါလာအောင် ပြောတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ဘက်ကို ပါလာပါတယ်။
We told the 88th Generation Students about it. They also accepted our ideas as to the issue!
၁၁၆။ အဲဒါကြောင့် ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုလည်း ဒီလူကြီးတွေသိအောင် ကျွန်မတို့ ပြောပြဖို့ဆိုတာ ကျွန်မတို့တာဝန်ပါ။
Therefore, we’re also responsible for explaining or telling all these matters to all the heads of all the organizations and of the parties.
၁၁၇။ အဲဒါကြောင့် ရခိုင်သားတွေ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းက ကျွန်မတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကို ရနိုင်သလောက်ရအောင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အခွင့်အရေးဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးပါ။
So, it’s our due right that we Arakanese people have to go on within the legal boundary and to ask for as many of our due rights as we can nowadays.
၁၁၈။ ပါးစပ်ပိတ်ပြီးနေဖို့ မလိုပါဘူး။
We don’t need to shut up our mouths!
၁၁၉။ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကသာ ကျွန်မတို့သွားကြပါ။ ကျွန်မတို့ လိုချင်တာတွေအားလုံးကို ရရပါ စေမယ်။
Just go on within the legal boundary. Everything we need will be gained!
၁၂၀။ ဒီအခွင့်ရေးတစ်ခုအတွက် ကျွန်မတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေ အများကြီး ပေးဆပ်ထားခဲ့ရပါပြီ။
For this privilege alone, we Arakanese have paid too much.
၁၂၁။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ ရခိုင်သားတွေအတွက် ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အချက်တွေကို နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ခန့် ကျွန်မတို့ဘာမှမပြောခဲ့ရဘဲ နှုတ်ပိတ်နေလာခဲ့ရတဲ့ ဒီကိစ္စတွေကို လူအားလုံးကို အားလုံးက ပြောနိုင်ရပါမယ်။
So all of us must be able to tell all kinds of people – no matter what their nationality is – about these real facts – the facts or privileges that we Arakanese have had to keep in heart for2whole decades and that we have wanted to pour out.
၁၂၂။ ဒါ့ကြောင့်မေ့မေ့လျော့လျော့မနေကြပါနဲ့။ အရာရာကိုသတိနဲ့နေပါ။ အားလုံးကို မျက်စိဖွင့်ပြီး ကြည့်ထားပါ။ ဒီကိစ္စရပ်တိုင်းဟာ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအရေးကိစ္စမှာသာ ကျွန်မတို့ ဒီကုလားတွေကို မနိုင်ရင် နောင်အနာဂတ်ဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
So, don’t live recklessly. Please keep your eyes and ears wide open. Everything about this case matters for every one of us. If we don’t win these Bengalis in this very issue, there’ll be no future for us.
၁၂၃။ အဲဒါကြောင့် ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး၊ ဘက်ပေါင်းစုံက လူအားလုံးဟာ ဒီကုလားတွေကို မနိုင်နိုင်အောင် ကျွန်မတို့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကို ခေါင်းထဲမှာ စွဲမြဲနေအောင် မှတ်သားထားရပါမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဆက်အသွယ်ရှိရပါမယ်။
So we should bear in mind that we must try our best to be able to beat those Bengalis in many different possible ways nowadays. We should have contact with one another.
၁၂၄။ ဒီရပ်ကွက်၊ကျေးရွာ၊နေရာတိုင်းမှာ ဖြစ်စဉ်တိုင်းဖြစ်စဉ်တိုင်းက အားလုံးရခိုင်သားတိုင်း ချိတ်ဆက်နိုင်အောင် အလျင်မြန်ဆုံး အကြောင်းကြားနိုင်ပြီး ဒီကိစ္စတွေကိုသတင်းပေးပို့နိုင်ရပါမယ်။
All the Arakanese people must be able to keep in touch with and report to one another immediately concerning every event happening in any ward, or village – wherever!
၁၂၅။ ဒီမှန်ကန်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မှာ ကျွန်မတို့ဘက်က တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကလည်း တတ်နိုင်သလောက် တစ်နိုင်ငံလုံး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို သိနိုင်အောင် အမြဲတမ်း တင်ပြနိုင်ရပါမယ်။
Those capable people from our side must always be able to present these true incidents to the whole country as well as to the entire world as much as they can.
၁၂၆။ အဲဒီိလို ကမ္ဘာက သူတို့လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်မတို့က ကမ္ဘာကိုပြန်ပြီး တင်ပြနိုင်ရပါမယ်။
We must be able to present all their deeds to the whole world, too.
၁၂၇။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ “ ‘ရိုဟင်ဂျာ’ လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးဟာ ရခိုင်ပြည်မှာမရှိဘူး၊ ဒီလူမျိုးတွေဟာ ငါတို့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး” လို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိသွားတဲ့အချိန်မှာ ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးကို သူတို့တွေရဲ့လူမျိုးအသစ်ဖြစ်တဲ့ နာမည်လေးတစ်လုံးကို ရဖို့အတွက် ဒေါ်လာငွေမီလီယန်နဲ့ချီပြီး အကုန်ခံထားရတဲ့ကိစ္စပါ။ သာမန်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ သန်းနဲ့ချီပြီးအ ကုန်အကျခံပြီးတော့မှ ဒီ ‘ရိုဟင်ဂျာ’ ဆိုတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့၊ ကမ္ဘာကလည်း လက်ခံလာစေဖို့ သူတို့တွေ ရင်းနှီးထားကြရတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ဒီကိစ္စတွေအားလုံးမှာ သူတ်ို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဒီလိုမျိုး အဖော်ခံရတဲ့အခါမှာ သူတို့အနုနည်းနဲ့မရရင် ကြမ်းပါလိမ့်မယ်။ ကြမ်းကိုကြမ်းလာပါလိမ့်မယ်။
So when the whole world have come to realize the fact: “There is no suchanationality called ‘Rohingya’ in Arakan State and they are not of our nationalities.”, (as they have invested millions of money in creating the brand new national race called ‘Rohingya’ and trying to make the world accept the presence ofanational race named ‘Rohingya.’), they will use hostile ways as an alternative of the peaceful means because their activities have been discovered. It’s very sure!
၁၂၈။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ ရခိုင်တွေ သတိရှိဖို့ လိုပါတယ်။
So we Arakanese need to be extremely conscious of everything happening.
၁၂၉။ အခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျွန်မတိုို့လိုအပ်ရင် အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာ စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို တင်ပြသလိုပဲ ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဖို့၊ သတိနဲ့နေဖို့၊ အမျိုးသားရေးသတိရှိဖို့ဆိုတဲ့ ရှေ့ကကျွန်မတင်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေဟာ ကျွန်မတို့ ရခိုင်သားတွေအားလုံး လုပ်ရမယ့်အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Besides the fact that we need to present and ask for the possibly necessary measures for our security to some extent, as I have just said, the set-up of people’s force, Arakanese’s keeping their eyes and ears wide open and having the national awareness that I’ve mentioned above are the essential things that every Arakanese has to abide by and put into practice.
၁၃၀။ မေ့မေ့လျော့လျော့ နေလို့ မရတော့ပါဘူး။
We should never keep living recklessly anymore!
၁၃၁။ ကျွန်မတို့ဘက်ကလည်း တတ်နိုင်သမျှ “ဒီကုလားနဲ့ရခိုင်တွေနဲ့ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်လို့မရဘူး” ဆိုတာကို တင်ပြနိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့မှာ သက်သေခံတွေ အများကြီးရှိနေတဲ့အတွက် ဒီအချက်တွေကို တင်ပြသွားပါမယ်။
For our part, too, we’ll try as hard as we can to submit to those with the national authourity many evidences that those Bengali people and we Arakanese cannot co-live with one another at any rate.
၁၃၂။ ဒါကြောင့် ချက်ချင်းအားလုံးမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ကျွန်မတို့တွေဟာ သည်းခံပြီးတော့ ကိုယ်ဘာလုပ်သင့်တာလဲဆိုတာကို အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီုး လုပ်ဆောင်ဖိုိ့လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ အမျိုးသားရေးသတိရှိဖို့ လိုပါတယ်။
Therefore, during the present time of not having everything made possible yet, we should tolerate and always think what exactly we should do. Not only women but also men should possess the national awareness.
၁၃၃။ ဒါကြောင့် “ဒီကိစ္စဟာ လွယ်လွယ်ပြီးသွားမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့အချက်ကို ခေါင်းထဲ ထည့်ထားဖို့ လိုပါမယ်။
So, we all should bear in mind that this issue won’t come to an end easily.
၁၃၄။ ဒီကိစ္စဟာ နှစ်နဲ့ချီပြီး ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။ သူတို့နှစ်ပေါင်း (၃၀)လောက်ရင်းထားရတဲ့ ကိစ္စကို ဒီတစ်လတည်းနဲ့ ပြေလည်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်လား။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ အနှစ်(၃၀)လုပ်ထားတဲ့ ဒီကိစ္စကို သူတို့က ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအပေါ်မှာ ကျွန်မတို့ ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေက ပိုပြီးသတိရှိရပါမယ်။ ပိုပြီး ညီညွတ်ရပါမယ်။
This issue can persist for years. Do you think that, within this month alone, we or any of us will be able to solve conclusively the scheme that they have invested in for over 30 years? No way! So, over their burning desire that they’ll try their utmost best for this over-30-year-old scheme, we Arakanese should be much more careful and extremely united, as well.
၁၃၅။ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ကျွန်မတို့နဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် အားလုံးဟာလည်း ကျွန်မတို့နဲ့ တစ်ဖက်တည်းဖြစ်နေဖိုို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရဟာလည်း ကျွန်မတိုိ့နဲ့ တစ်ဖက်တည်းရှိဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတော် စစ်တပ်အားလုံးလည်း ကျွန်မတို့နဲ့ တစ်ဖက်တည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီလို စည်လုံးမှုအင်အားကို ကျွန်မတို့ ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတွေက လိမ္မာပါးနပ်စွာလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ လက်ခံရပါမယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမယ်။
All the national races in Myanmar need to be of the same mind with us! All the national leaders need to be on the same side with us, too. The government also needs to be on our side. All the national military regiments need to be on our side, as well. All the Arakanese people must try, accept and be able to do for our own strength of unity shrewdly and cleverly.
၁၃၆။ သူတို့တွေအားလုံးကိုလည်း ကို်ယ့်လူဖြစ်အောင် ကျွန်မတို့ ရှင်းပြစည်းရုံးရပါမယ်။ သူတို့ကို ကန်ထုတ်ရင် တစ်ယောက်ကန်ထုတ်ရင် ကျွန်မတို့ဘက်က တစ်ဖွဲ့ဆုံးရှုံးတယ်လို့ မှတ်ပါ။
We must also organize them with patient, clear and correct explanation so that they will be our supporters. If one of us kicks them out, note very well that the whole group of ours is lost.
၁၃၇။ အဲဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကလည်း ‘ဒီရခိုင်အရေးဟာ သူတို့အရေးသာမဟုတ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့အရေး’ ဆိုတာကို အမှန်တကယ် သိမြင်သွားကြတဲ့အချိ်ိန်မှာ အားလုံးက ကြိုးကြိုးစားစာစား၊တည်တည်တံ့တံ့ ရပ်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ လိုချင်တဲ့ဆန္ဒ(ဖြစ်တဲ့) ‘သူတို့ကို မဖြစ်မနေ ဒီနိုင်ငံက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ နှင်ထုတ်ရမှာလဲ၊ ဘယ်လိုမျိုးနေရာချထားရမှာလဲ’၊ ဆိုတာမျိုး စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေ၊ ထွက်ပေါက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
Therefore,atime will come when all the members of the Rupublic of the Union of Myanmar will come to realize and believe thus: “This Rakhine issue is not just their (Arakanese’s) issue; it’s also the very issue of the Union of Myanmar!” If we can stand steadfast and upright till that time really comes, there will bealot of such questionable points and outlets from the present bitterly awful situations as this: “How will those Bengalis (so-called Rohingyas) be driven away without fail from this country? How will they be temporarily placed? ” This is what we want to gain!
၁၃၈။ ဒီကိစ္စကို နိုင်ငံတော်အစိုးရကို အကြံပေးဖို့၊ တင်ပြဖို့၊ လုပ်ဆောင်ရဖို့ကဏ္ဍတွေ အများအပြား ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
There’ll bealot of consecutive tasks to be suggested, submitted and carried out to the government of the Union of Myanmar.
၁၃၉။ အဲဒီလိုဖြစ်အောင်အထိတော့ ကြားအချိန်မှာ ကျွန်မတို့ တတွေ သတိကြီးစွာထားပြီး ဒီတာဝန်တွေက်ို မဖြစ်မနေသိအောင် ကြိုးစားကြပါ။ သိအောင်လည်း ကျင့်ကြံကြပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း သတိနဲ့ ဆင်ခြင်ပေးကြပါလို့ ကျွန်မ ပြောကြားလိုပါတယ်။
In conclusion, I’d like to say that, until the above positive things are really fulfilled and implemented, we have to live with special awareness, try to realize the above-mentioned responsibilities without fail, put the responsibilities into practice by your own conscience, and, lastly, always take special care of yourselves!!!
ဤဟောပြောချက်အတွက် ကူညီပေးကြသူများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
I’m greatly indebted to all those who had helped me with completing this work with their might and main!
တောင်းပန်ချက်။ ။ အမှားအယွင်းပါလျှင် ဝေဖန်ထောက်ပြပေးစေလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
My humble apology: Should there be any mistakes in translating or writing the talk, please don’t hesitate commenting on it openly. Open comments are warmly welcome!
အသံမှစာသားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပြီး၊ မြန်မာဘာသာနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုသူ - ဇွဲသစ် (ရမ္မာမြေ)